Pabrika vita amin'ny vy tsy voatanisa, mpamatsy - Mpanamboatra vy notifirina China
Manamboatra vy vy
Voatifitra vy voatifitra
Mitondra grit angular vy
Ny tifitra vy notapahana vy dia ny mampiavaka antsika manokana. Vita amin'ny SUS200, 300, 400 andian-tariby vy tsy tapaka notapahina ho faritra. Ny fitifirana tariby vy dia ampiasaina amin'ny fampiharana manan-danja mihamitombo izay misy ny fandotoana ferrous amin'ny famafazana vy vy, titanium
Ny tifitra vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy dia vita amin'ny tariby vy tsy miova SUS200, 300, 400 ary atao anaty baolina samy hafa boribory. Ny tifitra vy tsy misy volo dia manana fanoherana hafanana tsara, fanoherana ny harafesina, faritra manjelanjelatra.
Alatsaho ny tifitra vy vy
Ny tifitra vy dia karazana haino aman-jery izay nanjary nalaza kokoa. Ireo vokatra ireo dia manao toy izany koa amin'ny tifitra vy, na izany aza, vita amin'ny vy vy. Izy io dia mirakitra fatran'ny nikela sy chromium ambony kokoa. Ary mediana tsara hodinihina raha tsy fandotoana ferrous ilay sangan'asa